ABATHANDI BETAROT: INTSINGISELO, INDIMA NOKUNYE OKUNGAKUMBI
Ukuba ufuna ukwazi malunga abathandi tarot, emva koko uze kwindawo elungileyo, kuba kweli nqaku linomdla siza kuchaza zonke iinkcukacha malunga nekhadi elinamandla, intsingiselo yalo, inkcazo kunye nokunye. Dibana nathi!
1 I-tarot yabathandi
2 Intsingiselo yencwadi yothando
2.1 I-tarot yabathandi
3 Ukuthanda indibaniselwano yetarot
I-tarot yenziwe ngamakhadi angama-78, ahlulelwe phakathi Omkhulu uArcana kunye neArcana encinci. Ikhadi labathandi lilungu le-Arcana enkulu, limele inombolo ye-6, kwaye ibonisa amandla okhetho, ezothando, ubuhle kunye nomnqweno wesini.
Yi-arcane ebalaselisa ukubaluleka kothando, inkanuko, ulonwabo, umtshato, ukungathembeki kunye nomsebenzi wokutshata, phakathi kwabanye.
Eli phepha linamandla lisebenzisa amandla asidibanisayo sijolise kwabanye abantu esiziva sinomtsalane kubo, sinqwenela kwaye sibathanda. Iveza ubutsalane obudalwe kule meko, kwaye iyathetha ngesibophelelo esisibophelela kubantu abathile.
Siza kuchaza lonke olu nxibelelwano, imbalelwano kunye nenkcazo yeleta yothando ngokweenkcukacha zingezantsi, kweli nqaku. Kuya kuba yinto enomdla!
Intsingiselo yencwadi yothando
Kulo abathandi tarot, Zineentsingiselo ezininzi, kodwa masiqale ngokuchaza uhlobo lwearchetype ethiwe thaca ekhadini.
Kwi-numerology, le arcana iphambili imele inani le-6, elibonisa ukhetho, umnqweno, ukukhula kunye nolwazi ngamanqanaba amatsha, uthando, usapho, umtshato, ukugqibelela, umsebenzi kunye nokunye okuninzi.
Ileta evela abathandiI-Esoterically, kwi-astrology iyahambelana nomqondiso weVirgo, kwaye abanye bayayinxulumanisa nomqondiso weGemini. Nokuba kunjalo, imbalelwano yabo ichanekile kuba imele ukwindla.
Ukwindla kulungiselela ubusika kwaye kumema ukubonakaliswa, kukhuthaza unxibelelwano nabanye. Ukuzithemba kunye nokufuna ezinye iindlela zomjikelo omtsha ziyinxalenye yeli xesha lihle, yile nto ke le le leta isinika yona.
I-Kabbalistics isixelela ukuba le arcana iphambili inxulunyaniswe nomhlaba, enye yezinto ezine eziveze konke esikwaziyo namhlanje.
Le nto ilayishwe ngokhuseleko, uthando kunye noxolo. Ivumela unxibelelwano kwaye imema ubomi bosapho, inika ukhuseleko kunye nozinzo.
Inkcazo ye-archetype iyahluka ngokwetotot ephethweyo. Umzekelo kwi Abathandi betarot Marseille Sinokubona indoda incokola nabafazi ababini (i-blonde ekhangeleka isencinci kunye nenenwele emnyama ekhangeleka imnyama), kwaye phezulu ikomityi ezama ukudubula utolo kwelinye lazo.
Oku kumelwa kunokuthetha ukuba kukho ukhetho phakathi komfazi omncinci (umnqweno wesini) kunye nomfazi okhulileyo (ubukrelekrele kunye nothando).
Kwinkcazo ebonwa kwi- umkhweli wetarot wabathandi, kukho isibini (indoda nomfazi), abanokumela uAdam noEva. Kukho nomthi weziqhamo (isiqhamo esalelweyo), kunye nenyoka.
Phakathi kwabo ungabona iintaba ngasemva kwaye ilanga, kwaye kwilifu elikhulu kubonakala isithunywa esiza kubasikelela.
Konke oku kunokuthetha ukuba, ngokudibana kunye nothando njengesibini, xa usapho lusekwa, sifumana intsikelelo kwaye, ngokuxhomekeke kwizigqibo zethu, sinokuchaphazela konke oku. Ke ngoko, unxibelelwano yeyona nto iphambili esiyinike yona le arcane.
Xa ikhadi libonakala libuye umva, kunokwenzeka ukuba isigqibo ofuna ukusithatha asisiyona sihle ngalo mzuzu, kwaye kufuneka sicingisise ngaso ukuze sifumane enye indlela.
Inkcazo yeli khadi ikwanxulunyaniswa neapile lokungavisisani, xa kukhethwe eyona intle kwaye yeyona itsala eyona ndoda ibulela ubuhle bayo kunye nokulukuhla.
Kuxhomekeka indawo ekuyo, inokuchazwa ngeendlela ezahlukeneyo, esiza kuchaza apha ngezantsi:
Ukuba ibonakala ithe tye, ibonisa ukuba kukho ubudlelwane obulungileyo obubandakanyekayo, kuyakubakho umtshato okanye umanyano oluzinzileyo. Ukuba sele unobudlelwane, oko kunokuthetha ukuba yonke into ihamba kakuhle.
Ingabonisa ukuba kufuneka sithathe isigqibo esibaluleke kakhulu kwaye kufuneka sizivumele sihanjiswe ziimvakalelo zethu, iziphumo ziya kuba ngokwanelisayo ngokulinganayo, kodwa into kufuneka ishiywe ecaleni ukuze siye phambili.
Ubomi njengesibini buya busomelela kwaye buhlanganisiwe ngokuchanekileyo, ukuba sibona le leta kusenokwenzeka ukuba kukho umntwana obandakanyekayo. Oko kukuthi, ukuzalwa kuyasondela.
Ukuba eli khadi libonakala liguqulwe, ke lifuna ukubonisa ukuba kukho ukunxibelelana konxibelelwano, izimvo kunye nokubonisa into esiyifunayo.
Kubalulekile kwaye kuyimfuneko ukuba sikuhloniphe okuthethwa yileta kwaye senze ngokufanelekileyo, ukuphucula le meko, kuba ayilo leta ingentle kwaye ayizimiselanga ukuphela kobudlelwane bethu, kodwa kufuneka siphucule.
Ukuba ngenene sifuna ukuba nobudlelwane obomeleleyo nobukhuselekileyo ke ngoko kubalulekile ukuba kubekho ukulungelelaniswa kwamaxabiso kunye nemibono. Ngamana singacinga ngesi silumkiso kwaye siphephe isigqibo esingasifuni kwixesha elizayo.
Ukuba ukungathembeki kuye kwenzeka, kunokwenzeka ukuba izinto ziya kusonjululwa lo gama nje sikhangela indlela yokunxibelelana kwaye sazise izimvo zoluntu ngalunye ukuphucula oko kungaphumelelanga.
Ukuthanda indibaniselwano yetarot
Eli khadi linempembelelo ngeendlela ezahlukeneyo xa zidityaniswe nezinye iarcana zetarot, sichaza ezinye zeentsingiselo:
Umlumbi: uthetha ngamaqela abantu abavakalisa kwaye bathetha ingcamango.
Umbingeleli: ubonakalisa umsebenzi kunye nobulungisa, ngaphezulu kwako konke.
UKumkanikazi: amalinge amatsha namalinge.
Umlawuli: uzinzo luyafunwa kulwalamano lwesibini.
Umbingeleli oMkhulu: Amaxabiso okuqala alo naluphi na ulwalamano ahlonitshwayo kwaye aqiniswa ngakumbi.
Imoto yeTarot: ifuna ukuvuselela ubudlelwane kwaye ibeke ecaleni imiba eyenze nzima le manyano.
Ubulungisa: (izivumelwano zomthetho, iisayinithi ezibalulekileyo, unyuselo, uthando olutsha).
IHermit: omnye wabantu kubudlelwane (uthando okanye umsebenzi) akafuni ukuqhubeka nendlela efanayo.
Ivili lethamsanqa: izigqibo ezintsha kunye notshintsho.
Zininzi ezinye iintsingiselo kwindibaniselwano, kodwa ubukhulu becala ithetha ngonxibelelwano, ukuhlonipha amaxabiso, umbono, ukubonakalisa kunye neendlela ezintsha.
Ukuba ufuna ukuqhubeka nokonwabela umxholo wethu, sikucebisa ukuba ufunde inqaku lethu kwi jack yekrele.